Samsung kwupụtara Galaxy Tab S6 Lite ọhụrụ na weebụsaịtị ya | Gam akporosis
Taa, mgbe gọọmentị US veto Huawei, naanị onye nrụpụta nke na-enye mbadamba gam akporo ejiri a dị ịrịba ama àgwà bụ Samsung. Otú ọ dị, usoro mwepụta na ụdị nke ụdị ngwaahịa a bụ otu ma ọ bụ ọbụna karịa mgbagwoju anya karịa akara nke smartphones.
Ruo taa, anyị nwere n'aka nke ahụ Galaxy Tab S6 Ọ bụ ihe nlereanya kachasị ike na ngalaba nke mbadamba Samsung, na-esote Galaxy Tab S5e. Ihe ọhụrụ Galaxy Tab S6 Lite bụ ọkara n’etiti ha abụọN'adịghị ka S5e, ọ naghị enye nkwado zuru oke maka S-Pen, S-Pen nke gụnyere na igbe dị ka iPad.
S-Pen gụnyere n'ime igbe nke Galaxy Tab S6 Lite, ọ dị ka nke ahụ anaghị agụnye batrị, ya mere, anyị nwere ike ichefu ịme mmegharị na ihuenyo ma jiri ọrụ ikuku ndị ọzọ dị na Tab S6 na Note 10. S-Pen a yiri nke anyị nwere ike ịchọta na Galaxy Note 10 Lite.
Dị ka a tụrụ anya ya, ịbụ onye dị ala karịa Tab S6, RAM, nchekwa na igwefoto dị ala. Ejiri LCD dochie anya AMOLED ihuenyo nke Tab S6. Dịka anyị pụrụ ịhụ, akwụ ụgwọ ebe niile iji gbalịa ịnye ngwaahịa dị mma, mara mma ma dịkwa ọnụ ala.
Nhazi Amaghi 8-isi 1.7 GHz
Nchekwa 64/128 GB gbasaa site na kaadị microSD
Ihuenyo 10.4 anụ ọhịa ahụ na 2000 × 1200 mkpebi LCD
S-Pen Ee esịne ke ekebe
Rear igwefoto 8 mpx - 1080p na 30 fps
Njikọ USB-C - Njikọ igweisi - WiFi 5 - Bluetooth 5.0
A gam akporo A gam akporo 10 nwere otu UI 2.1
Akụkụ 244.5 × 154.3 × 7 cm
Ibu ibu 467 grams
Otu n'ime ihe ngosipụta nke Galaxy Tab S6 Lite bụ na ọ na-abịa site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe Android 10 esonyere otu UI 2.1 nhazi akwa, Ya mere, nwee obi ụtọ na akụkọ niile sitere na mmelite nke abụọ a nke ụdị nke abụọ nke UI 2.0.
O di nwute, edebeghi ya gini bu ugwo ma obu nnweta?, ya mere, anyị ga-echere ụbọchị ole na ole maka ozi dị ugbu a na Samsung Indonesia ka ọ dịrị na ụwa niile ma ọ bụ na opekata mpe na mba ndị isi ebe ụlọ ọrụ Korea na-ezube ịzụ ahịa ihe atụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung kwupụtara Galaxy Tab S6 Lite ọhụrụ na weebụsaịtị ya